မိန်းမတို့အဘို့အတိုဆံပင်အဘို့အတင့်တယ်ဆံပင်ပုံစံတွေ - ညဦးယံအချိန်, နေ့တိုင်း (ဓာတ်ပုံ)
တိုတောင်းသောဆံပင်များအတွက်ဆံပင်ပုံစံတွေ - 39 စတိုင်ပုံစံရွေးချယ်မှုများ
ခေတ်သစ် မော်ဒယ်ဆံပင်ညှပ် - ကအဆင်ပြေလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စတိုင်ပါပဲ။ လှပအထင်ကြီးကြည့်ရှုသည်ဤဆံပင်ပုံစံတွေစေရန်, သူတို့ lay အရေးကြီးပါသည်။ တိုတောင်းသောဆံပင်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မစောင့်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်ခဲ့သိပ်အချိန်ကြာပါတယ်။ အဓိကအရာ - အရည်အသွေးမြင့်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ကောက်ရန်။
က Short ဆံပင် Styling
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြတ်တောက်မှု၏ရှေ့တော်၌အဓိကတာဝန်, အမြစ်မှာ volume ၏ strands ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ဘုန်းအသရေကငျးမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတိုတိုဆံပင်အဘို့အပါးလွှာဆံပင်ပုံစံတွေဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ အဆိုပါသော့ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ပျက်စီးမှု minimize ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုတင်သောခြင်းမပြုမီ။ ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သော Overload မှုန်ရေမွှား အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုဆောင်း Basal အသံအတိုးအကျယ်:
Toni & Guy အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမြူခိုးနှင့်အခြားသူများ။
ဆံပင်ပုံစံထုတ်ကုန် Styling ထိုကဲ့သို့သောသော့ခလောက်နှင့်အဆီပြန်ဦးရေပြားအဖြစ်ဆံပင်ပုံစံတွေ, ဖန်တီးနည်းလမ်းပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအတွက်အောက်ပါ options များ fit:
အမှုန့်သို့မဟုတ် အခြောက်အခေါင်းလျှော်ရည် ,
ဆံပင်ညှပ်အထူးကိရိယာမပါဘဲ simulated "ကောင်လေးတစ်ယောက်" ။ ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်တိုတိုဆံပင်ထားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အစိုင်အခဲရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သော fixation, ဥပမာ, ဖယောင်း, ငါးပိ, ဒါမှမဟုတ်သရွတ်နှင့်အလှကုန်ထုတ်ကုန် styling ဒီရည်ရွယ်ချက်သည်။ ရှည်လျားသောနားပျဉ်းဖို့တိုတောင်းသောဆံပင်များအတွက်ပိုမိုခေတ်မီဆံပင်ပုံစံတွေ, အပူသက်ရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အသံအတိုးအကျယ်ဆံပင်ကောက်ကောက်ပေးပြီးအနေအထား၌သူတို့ကိုလုံခြုံမှကိုက်ညီ:
ဒါဟာဆံပင်ပုံစံတွေဖန်တီးအဖြစ်ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့လေထုစီးဆင်းမှု strands fluffy ဖြည့်စွက်ခြင်း, အကြံပြုချက်များကိုမှအမြစ်ကနေနှုတ်ဆက်စကားတလျှောက်ညွှန်ကြားရပါမည်။ စံခြောက်သွေ့ဆံပင်ကောက်ကောက်, ဆံပင် styling တိုတောင်းပျံ့လျှောက်ထားဆံပင်ကောက်ကောက် straightens ။ ထိုသို့သောပူးတွဲဖိုင်ကိုသူတို့ကိုအမြစ်နှင့် LIFT မှာ သာ. ကြီးမြတ်အသံအတိုးအကျယ်ပေးသော strands, curls ။
ဆံပင်လေမှုတ်စက်၏အကူအညီနှင့်အတူအိမ်မှာတိုတိုဆံပင်များအတွက်ဆံပင်ပုံစံတွေကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူသည်။ stacking နှင့် fixation များအတွက်နည်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးချင်းစီ strands ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအထီးကျန်ခံရနိုင် - ဘုရားကျောင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုဂျီသြမေတြီမှေးညှပျ, နောက်ကျောမှာဆံပင်ရုတ်သိမ်းပေးရန်, ဘန်အာရုံစိုက်ဖို့။ ဓါတ်ပုံများမှာပြထားတဲ့ဆံပင်လေမှုတ်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးမြန်ဆန်စတိုင်ဆံပင်အဘို့အ Options ကို။
Rectifier - တစွယ်စုံဆက်စပ်ပစ္စည်း။ ဒါဟာ ironing အားဖြင့်တိုတောင်းသောဆံပင် styling ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand တစ်လိမ်ကြီးစွန်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်သူမ၏မျက်နှာကနေအပျော့ဆံပင်ကောက်ကောက်ကိုရနိုင်ဆွဲထုတ်ဖို့မသာကူညီပေးသည်။ မွေးရန်မလိုဘဲဆံပင်လိုချင်သောအသံအတိုးအကျယ်ပေးရလွယ် nozzle ဂယက်ထ၏ရှေ့တော်၌။ Utyuzhok ဿုံအဆိုပါဆံပင်ညှပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကုသမှုပြီးနောက်, strands သူ၏စွန်းတိုင်အောင်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖယောင်းသို့မဟုတ်ငါးပိအလွှာမီးမောင်းထိုးပြနောက်ထပ်အသံထွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျဆံပင်သံသုံးပြီးရေတိုဆံပင်အတွက်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဆံပင်များစွာသောမူကွဲရှိပါတယ်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြောကမ်းနားလမ်းနှင့်အတူ styling ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်အချို့သည်အနည်းငယ်, အထူးသဖြင့် Bang တက်တင်းကျပ်ဆံပင်ညှပ်။ ဆံပင်၏အောက်ပိုင်းအလွှာနှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်ရုပ်သိမ်းခံရဖို့တစ်မြှောင်းပုံမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ Pre-ကုသများ၏အမြစ်များမှာဦးခေါင်း၏နောက်ကျောအပေါ်ဆံပင်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ဆက်နေတဲ့ဆံပင်ဖွဲ့စည်း၏ဥပမာများ။
curlers အတွက်တိုတောင်းသောဆံပင် Styling
အပူကုသမှုသော့ခလောက်လည်းခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ်ပျက်စီးများမှာအထူးသဖြင့်အခါ, အားလုံးမိန်းမတို့အဘို့သင့်လျော်ဘူး။ ဆံပင်လေမှုတ်စက်နှင့်သံမပါဘဲတိုတိုဆံပင် Styling curlers သုံးပြီးဖျော်ဖြေနေသည်။ အကြီးစားဆက်စပ်ပစ္စည်းပျမ်းမျှအရွယ်အစားကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကြီးမားလွန်းကြလိမ့်မည်။ အသေးစား curlers နှင့် bobbins ခဲရေတိုဆံပင်ပုံစံတွေ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဖြစ်ကြသည်။ ဆံပင်သူတို့သိသိသာသာ volume ထဲမှာတိုးလာနှင့်ပုံစံတစ်ခု dandelion ဆင်တူပြီးနောက်။
အများဆုံးအဆင်ပြေအပူလိုအပ်မ roller စဉ်းစားနေကြသည်။ ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand, စိုစွတ်သောအနာခြောက်သွေ့သောနှင့်လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်ဆည်းပူးနေကြသည်။ တိုတောင်းသောဆံပင်များအတွက် roller ၏လူကြိုက်များအမျိုးအစားများ:
Velcro ( "Hedgehog");
အဆိုပါကမ်းနားလမ်း၏အရှည်နားပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရောက်ရှိလျှင်, သင်ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့် bouncy စတိုင်များနဲ့ဆံပင်စေနိုင်သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖန်တီးရေခဲပြင်ဒိုးပစ်ကူညီပေးသည်။ ခေတ်မီ tools များသငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ကောက်ကောက်အချင်းနှင့်အတူတိုတိုဆံပင်များအတွက်ဆံပင်ပုံစံတွေလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ အနာ strands သောလှံတံ, ပျဉ်းမှအခြေစိုက်စခန်းထံမှ tapered, ဒါကြောင့်ဆံပင်ကောက်ကောက်, တူညီတဲ့အချိန်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်မှာရရှိသောလွန်း fluffy မဟုတ်, အဘယ်သူမျှမ dandelion အကျိုးသက်ရောက်မှုနေကြသည်။
ဆံပင်ကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းထိန်းသိမ်းရေးမပါဘဲရိုးရိုးအနည်းငယ်လက်တို့ကို fix နှင့်ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, ဆံပင်အလှဆင်, အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ:
သေးငယ်တဲ့ sparkly barrettes;
စံပြဆံပင်ညှပ်နှင့်အတူသေချာပေါက်နေ့တိုင်းအတူတူမကြည့်ပါဘူး။ အကူအညီကိုတင်သောများအတွက် Styling အလှကုန်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတစ်ဦးချင်းစီ၏ပုံရိပ်ကိုအလေးပေး, မိန်းမတို့အဘို့အတိုဆံပင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထူးခြားတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေဖန်တီးပါ။ သင်သည်သူတို့၏သော့ခလောက်အဘို့အအအောင်မြင်ဆုံးရွေးချယ်စရာအချို့ကို select နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ရဲ့ technique ကိုကွပ်မျက်ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါ။
လေ့လာအဖြစ်လျင်မြန်စွာလုပ်များနှင့်ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုနေသော Pack ၏ရိုးရှင်းမျိုးများအတွက်ကိုက်ညီအလုပ်ရန်။ : ကဲ့သို့သောတိုတောင်းသောဆံပင်သည်အလင်းကိုဆံပင်ပုံစံတွေဆိုဆက်စပ်ပစ္စည်းမရှိဘဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်,
ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖြောင့်, (ဖယောင်း, လိမ်းဆေး, မုန့်သို့မဟုတ်ငါးပိ) styling အချို့ strands မီးမောင်းထိုးပြ။
၎င်းတို့၏လက်ချောင်းဖြောင့်ခြင်းနှင့်ယွန်းနှင့်အတူကောင်းစွာဖြန်းဖို့ဆံပင် Wind ။
နောက်ကျောမှာမွေး Make က fix ။
စိုစွတ်သောဆံပင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတောက်ပချောမွေ့မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးရန်, strands လွန်ခဲ့တဲ့ Combed ။
ဆံပင် mousse သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ကိုဆကျဆံ, ကျပန်းသွင်းထားလေ၏။
တံသင်နှင့်အခြား devices များ၏အကူအညီဖြင့်ရေတိုဆံပင်များအတွက်ဆံပင်ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်အောက်ကပုံဥပမာနေသောခေါင်းစဉ်:
မမြင်ရတဲ့သူ၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောမှာသူတို့ကိုပြုပြင်ဖို့, တစ်ခုချင်းစီဘက်မှာနှစ်ခုပါးလွှာပုတီး Twisted ။
အသေးစား pigtail ဖွတ်မြီးထိုးနှင့်သူမ၏နားကိုထုတ်ချင်းခပ်ထိုး။
အဆိုပါ Bang ဖြီး up ပြုလုပ်ကောက်နှင့်ချိတ် fix "-clack ကိုကလစ်နှိပ်ပါ" ။
ပင်အိမ်မှာ, ဖျော်ဖြေဖို့လည်းလွယ်ကူပါတယ်အခမျးအနားတင်သော။ ကမ်းနားလမ်းရှိ Strand, Company နှင့်မိတ်ကပ်၏အရှည်ပေါ် မူတည်. အားလပ်ရက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တိုတောင်းသောဆံပင်အဘို့အဘယ်သို့ဆံပင်လုပ်ဖို့။ ထိထိရောက်ရောက်အောက်ပါ options များကြည့်ရှု:
လွမ်းသူ့ပန်းခွေများကဲ့သို့သူတို့နှင့်အတူမျက်နှာဆင်, ဦးခေါင်း၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာပတ်လည် strands Twisted ။ stack အရောင်တင်ဆီနှင့်မမြင်ရတဲ့ Secure, တောက်ပဆက်စပ်ပစ္စည်းအလှဆင်။
slick ပြန်ဖွင့်သော့ခတ်။ ယင်း၏ကြီးစွန်းထိပ်ပေါ်မှာလေးကိုပြုပြင်တာတွေ, ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တောက်ပပဝါကိုကြိုးနဲ့တုတ်။
ဘေးထွက် strands ၏ကြီးမားသောဆူးမျိုးကိုရက်ကြောင့်အဆင်းလှချိတ်နားကို fix ။
အားကြီးသော bouffant retro အောင်ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောတွင်။ နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ဆံပင်ကောက်ကောက်ပါးလွှာသောအနီရောင်ဖဲကြိုးကိုတင်သောအလှဆင်, ကိုယ်ပျောက်သုံးပြီးအောက်စွဲစေ။ အထင်ကြီးဂန္နှင့်တိုးချဲ့, Bang နှင့်အတူတိုတိုဆံပင်အတွက်ဤဆံပင်ပုံစံတွေကိုကြည့်။
မိန်းမတို့အဘို့က Short ဆံပင်ပုံစံတွေ
Sedin - အကြောင်းရင်းများ
ပတ်ပတ်လည်မျက်နှာအဘို့အက Short ဆံပင်ပုံစံတွေ
အနက်ရောင်အပေါ် Ombre ဆံပင်
ဆံပင်၏ Calamus အမြစ် - ဆံပင်၏ဦးခေါင်းကို thinning ၏ကယျတငျတျောမူခွငျး
ဆပ်ပြာ, ကိုယ်လက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Bang နှင့်အတူဆံပင်ပုံစံတွေ - အားလပ်ရက်နှင့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မူရင်း options များ
ADSM ကာကွယ်ဆေးထိုး - မှတ်တမ်း
Adriana Lima - အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ
HCG ၏ analysis - စာဝှက်ဖေါ်
ဂေါ်ဖီထုပ်ချဉ် - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
နွေဦးစုဆောင်းမှု 2013 Givenchy မိတ်ကပ်
Marrakech - ဟိုတယ်
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တစ်ဦးကအရည်ဓာတ်စာ - ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် menus တွေ
မျက်နှာများ၏ ultrasonic သန့်ရှင်းရေးအတှကျအယန္တရား
မီနှင့်ပြီးနောက်: 15 ကြယ်ပွအလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး stylist ပြီးနောက်သင်ယူပါဘူး!